UNolwazi uyakujabulela ukulingisa kwi-Ngane Yami
UMLINGISI wakuleli oseke wahlonishwa ngendondo yeSouth African Film and Television Awards (Safta), uNolwazi Ngubeni uthi kuyinto enkulu ukubonakala emdlalweni othi Ingane Yami, noqale ngoMsombululo kuMzansi Magic.
Lo mdlalo okhuluma ngokuthunjwa kwezingane uneziqephu ezingu-13, kanti uNolwazi ulingisa indawo kaSbongile Dlomo. Echaza ngokuba yingxenye yomdlalo uNolwazi uthi, kukhona izinto ezimbalwa ezenziwa nguSbongile nezingajwayelekile kumuntu ophile saka.
“Ngaphakathi kuyena uzibona engowesifazane olwela umndeni wakhe. Okuyinto eyenziwa iningi labesifazane uma libona kukhona uqhekeko emndenini. Ngiyathemba abantu bazomthanda uSbongile futhi bagcine bebona ukuthi konke akwenzayo ukungalimazi abanye kodwa ukwakha umndeni wakhe. Indawo kaSbongile ingenye yezihamba phambili esengizilingisile futhi ngiyathemba abantu bazoyijabulela,” kuchaza uNolwazi.
Uthi kuyinto ethokozisayo ukusebenza namaciko anamakhono ahlukene.
“Abantu engisebenze nabo, engibahlonipha kakhulu kulo mkhakha esikuwona. Ngiyathemba ukuthi ababukeli bazokubona ukuzikhandla kwethu nesikhathi esisisebenzile, nokusebenza kanzima esikwenzile siqopha lo mdlalo,” kuphetha uNolwazi.
Le ntokazi esineminyaka engu-14, isendimeni yokulingisa ike yaba ingxenye yemidlalo okubalwa kuyo i-Otelo Burning, InterseXions, The River, A Place Called Home, Mtunzini.com, Soul City neminye.
Useke waba semathimbeni aqoka abalingisi bemidlalo okukhona kuyo i-Intersexions II, Nothing For Mahala, The Chemo Club, Farewell Ella Bella, MTV Shuga, AboMama, Umlilo neRhythm City.